တရားတော် mp3 free download | Myanmar By The Chant Of Metta Download On MP3CooL Music - 2018-07-22
တရားတော် mp3 free download. MP3: Myanmar Tayar Buddha Tayar Taw Бесплатно Скачать Mp3 и Слушать Онлайн 2018-07-22
တရားတော် mp3 free download Rating: 9,5/10 106 reviews
Myanmar By The Chant Of Metta Download On MP3CooL Music
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အရှင်ဦးဥာဏိဿရ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ တရား တော် အခွေ ၄၅ ခွေနှင်. ဆရာတော် ဘုရားကြီးများ ၏ တရားတော်များ တရားပေါင်း မြောက်များစွာ ကို အောက်က လင်. . . တစ်ဘ၀ သာသနာ ကျမ်းပြု ဆရာတော် အရှင်ဃောသိတ မထေရ်မြတ်၏ ရုပ်ကလပ်တော်မှ မီးမခပဲကြွင်းကျန်ရစ်သော မျက်လုံးတော်၊ နှလုံးတော်၊ ချိတ်ဆက်နေသော အရိုးတော် နှင့် အခြားအရိုးတော်များ ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်.
U Nyanissara Mp3 Free Download
. အန္တီမ အဂ္ဂိဈာပနပူဇာ Video မှတ်တမ်း မှ. ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဥာဏ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းတိပိဋက ဓမ္မနာဒ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ အာဒိကမ္မိက ပရိယတ္တိသာသနဟိက ဓမ္မာစရိယဝဋံသကာ၊ အာဒိကမ္မိက တိပိဋကဓရဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက၊ ဆဌသံဂီတိဝိဿဇ္ဇကအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ် ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ တရား အခွေ ၆ ခွေ နှင်. အခြားတရားတော်များ အမရပူရမြို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ. နိုင်ငံခြား သားတွေကို English လို ဟောသော တရားခွေ များကို ဓမ္မ ဒါန ပြုလိုသူများ.
ရပါကြောင်း နိဗ္မာန် အကျိုးမျှော် နိုးဆော် အပ်ပါကြောင်း. . လူပုဂ္ဂိလ် ဟော မှ ကျွတ်မှာလား ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး. ပွားရေး အတွက်လူ ဓမ္မကထိကများလည်း ရှိပါတယ်. D အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဝါစက ပဏ္ဍိတ ပါဠိ ပါရဂူ သ၊ စ၊ အ ဓမ္မာစရိယရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ ပါမောက္ခချုပ် စစ်ကိုင်းမြို့ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ တိုက်အုပ်ဆရာတော်။ တရားတော်. . မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဇနိတရာမကျောင်းတိုက် ပဓာနနာယက အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္ဘဇနိတာလင်္ကာရဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဥပနိသရခံ မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ နာယက ထူးကြီးဆရာတော် ဦးဣန္ဒာဝုဓာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ.
Thitagu Sayadaw Mp3
ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ တရား အခွေပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးလောက်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်. ဟာ ဘုရား သာဝကလား ဘုရား ဟော မှသံသရာက ကျွတ်မှာလား. . . . . .
အရှင်ကုသလဇောတိ ကိုယ့်ကံကြမ္မာပါးစပ်ပေါ်မှာ တရားတော် mp3(1)Download
လရောင်ဆန်း : mp3တရားတော်များ ဒေါင်းလော့ယူရန်